Google Meet dia nihoatra ny 50 tapitrisa alaina | Androidsis
Google Meet dia nihoatra ny 50 tapitrisa alaina
Hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina dia maro no voatery nijanona tao an-trano. Raha te hifandray amin'ny olon-kafa, dia nanjary ny fampiharana antso an-tsary malaza indrindra sy alaina indrindra eran-tany, maha-Zoom, iray amin'ireo izay nitombo indrindra.
Saingy ireo olana samihafa amin'ny fandriam-pahalemana izay hita teo amin'ny lampihazo, nanery orinasa, governemanta ary andrim-pianarana maro hitady fomba hafa. Google Meet, miaraka amin'ny Skype, dia roa amin'ireo serivisy izay nandray soa indrindra. Ny vahaolana Google ho an'ny fitaovana Android dia nihoatra ny 50 tapitrisa aza ny fisintomana.
Izay atolotry ny Google Meet ho anay
Ny vahaolana natolotry ny Google Meet dia ahafahantsika manao fivoriana na aiza na aiza, miaraka amin'ny fetra mpandray anjara lehibe indrindra 250, fetra izay tsy ho hitantsika amin'ny serivisy fampiresahana horonantsary rehetra.
Ny fandidiana dia mitovy amin'ny atolotry ny Zoom, fivoriana izay anaovana azy afaka miditra amin'ny alàlan'ny rohy iray isika, fiasa mety hanangonana olona marobe, olona azo ampidirina amin'ny sehatra rehetra.
Ny iray amin'ireo fiasa natolotry ny Google Meet dia ny dikanteny amin'ny fotoana tena izy, fiasa iray ahafahantsika miresaka amin'ny olona amin'ny fiteny hafa.
Ity fampiasa ity, izay azo alaina ao amin'ny Skype ihany koa, dia mety indrindra ho an'ny orinasa, iray amin'ireo tsena manokana izay ezahin'i Google manitatra ny serivisinao, avy amin'ny tanan'ny Google Docs.
Mandritra ny herinandro mahery, Google Meet dia azon'ny rehetra alaina maimaim-poana, Ka raha tsy orinasa ianao ary mila manangona olona marobe, raha malalaka dia azonao atao ny mampiasa azy nefa tsy mila mandalo ilay boaty amin'ny fotoana rehetra.
Raha te hampiasa an'ity rindranasa ity amin'ny finday avo lenta Android dia tsy maintsy tantanan'i Android 5 na avo kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Meet dia nihoatra ny 50 tapitrisa alaina
Ny herin'ny chipset Dimensity 1000+ vaovao an'ny Mediatek dia asehon'i Geekbench ao amin'ny iQOO Z1
Dungeon of Weirdos dia fiovana hafahafa amin'ny Pac-Man